Mootummaan Woyyaanee inni Oromotti taphatu fagoo miti yeroon gatii hujii isaa argatu - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Mootummaan Woyyaanee inni Oromotti taphatu fagoo miti yeroon gatii hujii isaa argatu
Mootummaan Woyyaanee inni Oromotti taphatu fagoo miti yeroon gatii hujii isaa argatu
Oromoonni baatii afran dabran keessatti garajabeennaan haala hedduu suukkanneessaa ta’een ajjeefaman badii tokkos qabaatanii miti. Dabriinsa lubbuu lammii keennaatif sabab kan ta’e gootummaan daanditti bayanii mirga isaanii gaafachuu fi haqa isaaniif falmachuudha. Namoonni hiriira irraa qooda hin fudhatinis, Oromoo ta’uu isaa qofaaf, haalli itti ajjeefaman jiraachuu isaati kan gabaasni addaddaa saaxilutti jiru.
Oduun gara mootummaatiin jiru isa biraati. Kan afaan angawootaa bayuu fi miidiyaleen isaaniitiin hafarfamu hundi faallaa waan Oromoon hubatuu fi lafarratti mudhatuuti. Namoonni qabeenna barbadeessuu isaaniitiif kan ajjeefaman, akka mootummaatti. Sochii baatii 4 oliif ta’een qabeenni Birrii miliyoona 100,000,000 tti shallagamu galaafatamuu isaati kan Haylamaaram Dassaalenyi nutti hime. Mootummaan kuni dhugaa dhoksuu fi waan hin jirre uumaa hafarsuudhaan beekamaadha. Walakkaan waan HD jedhe dhugaadha (qabeenni 50,000,000 tti tilmaamamu manca’e) haa jennuumee.
Baatiidhuma afran dabran qofa keessatti yoo xiqqaate lubbuu nama 400 olitu harka mootummaa kanaati bifa fokkisaa ta’een kan galaafatame. Isaan madaayan dhiisaa qabeenya manca’e jedhamee fi lubbuu Oromoo galaafatamee qofa yoo wolbira qabame (wolbira qabuunuu gama tokkoon sirrii hin turree) namni tokko baajaajii kuffisuu ykn ibiddaan barbadeessuu isaatiif rasaasa hedduun kallacha, laphee fi dudda irra rukutamaa kan ajjeefameef. Addunyaa biraa irrattii mitii biyyoota Afrikaa hedduu keessatti baajaajii kuffisuun lubbuudhaanii mitii hidhaa cimaan waan nama adabsiisu miti. Keessumaattuu hiriira nagaa irratti. Kan hubatamuu qabu hiriira nagaa irratti balaa qabeenya irra gayuuf itti gaafatamummaan guddaan kan jiru mootummaa ummata aarsee daanditti akka isaan baya dirqisiise irra.
Yeroo dabre kanatti badii tokko osoo hin raawwanne hiriira bayuu isanii qofaaf kan madaayee fi qaama hir’uu ta’e danuudha. Worri hidhaa jiranis qarqaruma du’aa irra kan jiran. Daandii irratti osoo hin hafin humni Woyyaanee akkam akka nama gidirsuu fi qawween akka nama burkuteessu hundi argineerra. Mana hidhaa keessa hadhaan jireenaa (rukutaa, beelaa fi dheebuun nama rakkisuu) maal akka fakkaatu worri Woyyaaneen hidhame beeka. Garajabeenna Woyyaanee tilmaamuuf hidhamuun dirqamaa miti garuu- alatti ifatti mudhatta waan ta’eef.
Mootummaa Woyyaaneetiin baajaajii kuffisatanii ykn hujiin ala gootan himannaa jedhuun kan lammii irratti duguuggiin sanyii labsamee. Saba kanaaf kabajaa wanti jedhamu tokko jiraachuu dhabuu isaati kan Woyyaaneen irra deebi’tee ragaa baate- akkuma durii kaasee beekamu. Jibbaa fi tuffii mootummaan kuni Oromoof qabu; akkasumas tankaarii garajabeennaa inni Oromoo irratti raawwatu Oromoon yoomuu caalatti qajeelatti kan hubatu. Wanti gaariin, Oromoon akka kufee fi tuffatametti kan hin hafne ta’uu gootummaan dargaggoo isaa ifatti mul’isee jira. Gaafa aduun baatee kabajaan Oromoo bakkatti deebite, murna har’a akkas nutuffatu, gocha garajabeenyaa nurratti raawwatu kan hedduu salphatu, rakkatu. Kuni yoomi laata kan isaanitti mul’atu? Mootummaan kuni boolla badii gadi fageessee ufii qotuu osoo dhiisee gaarii ta’a. Worri itti dhiyaattan gorsaa…ergaa Oromoos dabarsaa.
Previous articleUmmata beelaye miliyoona 10 oli du’a irraa hanbisuuf gargaarsa doolaara biliyoona 1.4 barbaachisa jedhame
Next articleJaarmayaaleen Oromoo waliin hojjachuu danda’uu qofa kan Oromoo injifannotti geessu